I-Rosedale Organic Farm kunye ne-B&B, i-Cottage (Twin) - I-Airbnb
I-Rosedale Organic Farm kunye ne-B&B, i-Cottage (Twin)
Sundays River, Eastern Cape, eMzantsi Afrika
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguKeith
IRosedale B&B yifama yesitrasi kunye neenkomo eziphila ngokupheleleyo eAddo Valley imizuzu eli-10 kuphela ukusuka kwindawo edumileyo yeAddo Elephant National Park, sinikezela ngamagumbi amahle abucala, amagumbi abekwe kwisitiya esikhulu sendalo esigcwele izityalo kunye neentyatyambo zaseAfrika. Imithi yeLamuni neyeOrenji ejikeleze yonke loo propati.
Isidlo sakusasa esiphekwe ekhaya ukuze ulungele usuku olumnandi lokubukelwa kweeNdlovu siyanikezelwa rhoqo kusasa
UKeith noNondumiso abasindwendwe bakho badibana baza bathandana ngexesha loCalucalulo olwalunenkathazo kwaye ngokusebenza nzima nokuzimisela baloyisa ucalucalulo nocalucalulo ukuze benze iFama yaseRosedale ibe yifama enempumelelo yosapho oluqhuba amashishini kunye nefama yokuqala eqinisekisiweyo yeorganic eAddo Valley.
Kuninzi okubonayo nokwenza ngaphakathi nakwindawo ekufutshane neAddo, singabhukisha ngaphambili iiGame Drives kunye nolunye uhambo oluza kuwe.
Kukho iivenkile kunye neendawo zokutyela ezikufutshane nepropathi yethu kuzo zonke iimfuno zakho.
Ifama ayiloshishini kuphela kodwa ikwalikhaya loSapho ke uya kuba yinxalenye yosapho kodwa kwangaxeshanye indawo yakho yokuhlala yahlulwe kwindlu enkulu ikunika ubumfihlo bokuphumla kwaye ujabulele iigadi okanye ube nediphu ehlaziyayo kwindalo. gxuma ichibi
Ifama ayiloshishini kuphela kodwa ikwalikhaya loSapho ke uya kuba yinxalenye yosapho kodwa kwangaxeshanye indawo yakho yokuhlala yahlulwe kwindlu enkulu ikunika ubumfihlo bokuphuml…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sundays River